Indlu yoDoli kunye neFenitshala yeFenitshala-yaseChina iNdlu yeeDola kunye neeFenitshala zeFenitshala, abaXhasi
Indlu encinci yoDoli enefanitshala | Indlu yokudlala yeplanga enezixhobo zeMinyaka emi-3 + yobudala
• INDLU YOPHUPHO OLUPHEPHILEYO: Uninzi lwabantwana baphupha ngendlu yoonodoli. Le ndlu inkulu yosapho lonodoli inokwenyani njengoko injalo. Indawo yokudlala efanelekileyo iquka igumbi lokulala eliyintloko, igumbi labantwana, igumbi lokufundela, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela, iibhalkhoni, igumbi lokutyela, ikheshi.
• YILA IKHAYA LAKHO NGOKWAKHO: Vumela ubuchule bomntwana wakho bokuchuma buchume ngesixhobo seefenitshala ezili-15. Yila ikhitshi elihle okanye igumbi lokulala elinodoli kwaye uvumele umbono wakho usebenze simahla.
• ITHAYI ELIPHELELWE XESHA: Dibanisa nezinye iiseti zeDoll House kunye nefenitshala ukuphucula amava omdlalo. Ukulinganisa usapho lwakho lonodoli mihla le kuya kubangela ubuchule kunye nokuvuselela iingcinga zabantwana